नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट सरकारमा सहभागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री सरकारबाट बाहिरिएका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थमा कर कटौती गर्न सरकारलाई गठबन्धनको निर्देशन, प्रति लिटर ३० रुपैयाँ घट्न सक्ने
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर कटौती गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय सरकारको बजेट?
संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएसँगै अब स्थानीय सरकार बजेटको तयारीमा जुटेका छन्।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ: सरकार अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा गइसकेको सरकारले जनाएको छ।
मन्त्री आलेको आक्रोश- सर्वोच्च अदालतलाई निजगढ विमानस्थलबारे बोल्ने अधिकार कसले दियो? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको दाबी गरेका छन्।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २२ निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेजाब नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा भन्छन्- ‘हामीलाई हटाउने निर्णय भएको थाहा छैन’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्री हटाउने तथा नयाँ पठाउने विषयका आफ्नो पार्टीबाट कुनै जानकारी नआएको बताएका छन्।
एकीकृत समाजवादीबाट बन्ने मन्त्रीको आज शपथ ग्रहण नहुने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट बन्न लागेका चार मन्त्रीको आज शपथ ग्रहण नहुने भएको छ।
एकीकृत समाजवादीमा किन भयो मन्त्री फेर्ने छलफल? नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ।
एकीकृत समाजवादीले चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले चार जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ।
बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेको छ।
आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध सहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १० निर्णय सरकारले सार्वजनिक हितका आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ।
महानिरीक्षकबारे मन्त्रिपरिषद् निर्णय- सबैभन्दा उपयुक्त धीरजप्रताप सिंह नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सबैभन्दा उपयुक्त धीरजप्रताप सिंह रहेको जनाइएको छ।
गोविन्द बन्दी कानून मन्त्री बन्ने, बडूलाई उद्योग
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाउन सिफारिश गरेका छन्।